Chero mamiriro ezvinhu apo chikafu kana zvinwiwa zvinounzwa patafura zvinowanzoda chipikiri. Iyo huwandu inoenderana nerudzi rwekudya iwe urikunakidzwa. Maitiro akajairwa ekupinza muEurope ndere kusiya chikwereti chimwe kana zviviri zveEuro pamusoro peiyo mari yechinwiwa kana doro rechinwiwa asi pasina chikafu chakarairwa.. Kudya kwakazara munzvimbo yekugara-pasi kwakasiyana. In iyi, a few euros per person is usually sufficient. Five-star restaurants across Europe usually include the tip in their bill. Ive nechokwadi chekutarisa izvi sezvo pasina chikonzero chekusiyira imwe chiputi kunze kwekunge iwe wakanyatsofarira basa rako. Kushumirwa kwakanaka dzimwe nguva kunoda imwe nyowani yekuwedzera, saka mune zviitiko izvi, unogona kuenda nzira dzese kusvika 15%.
Vanhu vazhinji vanoda kuwana itsva nyowani hairdo, kana kuzorodza pari pazororo. Neraki iwe uchawana maspas uye stylists kwese kuEurope, kazhinji mumaguta ese. Kupa zano, mune izvi zviviri, kazhinji inosvika gumi muzana. Kana iwe uri kufara zvinoshamisa neshumiro yawakagamuchira, iwe unogona kuenda kwakakwirira se 15%.
Mahotera ndeye mubvunzo unowanzoitika kana zvasvika kumubvunzo wekupeta muEurope. Sezvo mutemo wegunwe, mumwe anofanirwa kugara achitevera iyo Yeuro Euro nhungamiro. Izvi zvinoreva kwazvo kuti iwe unosiya imwe Euro mumaritsi pesevhisi. Kana bellhop kana porter inotakura mabhegi ako, ipapo imwechete Euro kubhegi zvakakwana. Kuchenesa imba kunofanirwa kugamuchira Euro pazuva. Kupa zano macomputer ako zvinoenderana nekufunga kwako, asi zvinofanirwa kuchitsamira padanho rebasa rawakagamuchira. Kana ivo vakaenda pamusoro nepamusoro kuti dai imi muchigara musingakanganwiki uye nekunakidza, ipapo chidimbu chemadhigiri mashanu kusvika gumi kana kutopfuura chinokodzera.
Chii Kune Tip Matekisi And Transport
Taxi uye Ubers chikamu chemukati chekusvika kutenderera kuEurope. Kana uchisarudza zvipi zvekupa, zviri nani kugara uchifunga kuti mutyairi anobhadharwa sei. nyanya, Zvisinei, maviri Euro tiketi kune pfupi kapfupi kana Uber kukwira zvakakodzera. Mapurogiramu akadai saUber anokutendera kunongedza mutyairi nemagetsi, nepo metered metekisi ichada mari. Kupa zano muEurope uchifamba kwakafanana nekupuruzira mumabhawa kana mumaresitorendi. Ramba uchifunga kuti hazvisi hazvo kudikanwa nguva dzose, but often appreciated. Kutakurisa matikiti ako echitima enyu European rwendo yakapusa uye yakapusa neIye Yakachipa Zvitima Zvitima Website MuNyika.
Kunyangwe chiri kudzikisira kune kwavo Viking mavambo kana kungori nyore zvematongerwo enyika, nyika idzi dzinokuda iwe kuti urege kupotsa wakati. Maresitoreti mazhinji nemasevhisi anozove nemucheto unosanganisirwa mubhadharo. It is still appropriate to round the bill up to the nearest Euro instead of a tip either via cash or credit card.
Vanozivikanwa neushamwari hwavo, marudzi maviri aya achatakura mabhegi ako achifara. Kubvunza kune vatakuri vemitoro hakuna kukosha, and is usually not expected. Kuva nenyasha uye kutaura uchitenda neruremekedzo ndizvo, zvisinei, zvinotarisirwa. Kana iwe uchida kugamuchira sevhisi imwechete mune inotevera kubva kune porter yako, ave nechokwadi chekuvabvuma zvakanaka.
Chii To Tip In Europe – Britain
Zano rakanakisa rekupinza muEurope kuita basa rako rechikoro rinoitirwa kumba. Verenga zvese nezvenyika, kana nyika dzauri kuronga kushanyira. rangarira izvozvo nzendo dzechitima kazhinji dzinotora iwe kupfuura dzinoverengeka nyika kuti iwe ugone kumira pa. Gara uchiuya nemari, zvese mari, uye zvinyorwa zvishoma zvekupa mari. Kana iwe usina chokwadi nezvezvirongwa, namatira kune gumi muzana mutemo wekudyira, and the one Euro rule for everything else.
Unoda embed yedu Blog romukova “Iyo Yekupedzisira Dungamira Yekupinza MuEurope” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ane kubatana uku Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fguide-tipping-europe%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)